ပုရိသယောကျြားတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ကောငျမလေးခြောခြောလှလှလေးတဈယောကျ ရှိနရေငျ မကျြလုံးအစာကြှေးတတျကွတာက ထုံးစံပါပဲ။ သူတဈပါးရဲ့ ဣန်ဒွကေို ထိခိုကျလောကျအောငျ ပျေါတငျကွီး မကွညျ့ရငျတောငျမှပဲ ခိုးကွောငျခိုးဝှကျကွညျ့ကွတာမြိုးပါ။
ဒါပမေဲ့ အခု ဂြူဗငျတပျဈကှငျးလယျလူ မကျကနျနီကတော့ သူ့ရှကေ့ နတျသမီးလေးရဲ့ အလှရစေီးကွောငျးမှာ ဟနျမဆောငျနိုငျလောကျအောငျ မြောပါပွီး ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ မကျြစိအစာကြှေးနတေဲ့ရုပျပုံက လူမှုကှနျရကျတှမှော ကောငျးကောငျးအလှောငျခံနပေါပွီ။
အဲဒီနတျသမီးလေးကလညျး မကျကနျနီတငျမဟုတျဘူး၊ ပုရိသတိုငျး ကွှကေရြလောကျအောငျ လှသှေးကွှယျနတေဲ့ အားကစားအစီအစဉျတငျဆကျသူ ဒီလကျတာလီယော့တာလို့ အမညျရတဲ့ ခပျမိုကျမိုကျ မဒီလေးဖွဈပွီး သူမရဲ့ Instagram မှာ Follow လုပျထားသူက (၇)သနျးကြျောအထိရှိနတောပါ။
လီယော့တာက စီးရီးအပှေဲတှကေို တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့နတေဲ့ DAZN ရုပျသံလိုငျးက အားကစားအစီအစဉျတငျဆကျသူဖွဈပွီး သူမဟာ ပွီးခဲ့တဲ့စနနေကေ့ ဗီရိုနာနဲ့ဂြူဗငျတပျဈတို့ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမတိုငျခငျ ဂြူဗငျတပျဈအရနျခုံတနျးနားမှာ အစီအစဉျတငျဆကျနတေုနျး မကျကနျနီက အဲဒီအခှငျ့အရေးကို လကျလှတျမခံဘဲ အပီအပွငျကွညျ့ခဲ့တာပါပဲ။
သာမနျလောကျသာဆို ဘာမှမဖွဈပမေယျ့ မကျကနျနီကွညျ့တဲ့ပုံက အသကျရှုဖို့တောငျမလေ့ောကျတဲ့အထိ ပါးစပျအဟောငျးသားနဲ့ ကွညျ့နတေဲ့အပွငျ ကံဆိုးခငျြတော့ ကှငျးထဲက ကငျမရာကလညျး မကျကနျနီ မကျြလုံးအစာကြှေးနတေဲ့အခြိနျနဲ့ ကှကျတိရိုကျမိခဲ့တာကွောငျ့ အဲဒါကို သတိပွုမိလိုကျတဲ့ လူမှုကှနျရကျအသုံးပွုသူတှရေဲ့ Meme လုပျတာကို ခံရတော့တာပါပဲ။
Twitter မှာ မကျကငျနီရဲ့ဓာတျပုံနဲ့အတူ ပရိသတျတှကေ နောကျပွောငျနကွေပွီး Twitter အသုံးပွုသူတဈဦးက “မငျးလညျး ငါတို့လိုပါပဲလား မကျကနျနီရယျ”လို့ နောကျပွောငျရေးသားခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံက ပရိသတျတှလေညျး လီယော့တာရဲ့ အလှအပတှကေို ခံစားခငျြရငျတော့ Instagram မှာ Diletta Leotta လို့သာ ရိုကျထညျ့ပွီးရှာကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကံဆိုးတာက လီယော့တာဟာ တူရကီရုပျရှငျမငျးသား ကနျယာမနျနဲ့ တှဲနပွေီး မကွာသေးခငျက ရောမမွို့မှာရှိတဲ့ အကွီးစားဟိုတယျတဈခုမှာ သူတို့နှဈဦး (၅)ရကျကွာအတူတူရှိခဲ့တာကွောငျ့ နှမြောတသဖွဈစရာလို့ပဲ ပွောရတော့မှာပါ . . . . .
အကြည့်တစ်ချက်ကြောင့် အလှောင်ခံနေရတဲ့ ဂျူဗီကွင်းလယ်လူ မက်ကန်နီ
ပုရိသယောက်ျားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကောင်မလေးချောချောလှလှလေးတစ်ယောက် ရှိနေရင် မျက်လုံးအစာကျွေးတတ်ကြတာက ထုံးစံပါပဲ။ သူတစ်ပါးရဲ့ ဣနြေ္ဒကို ထိခိုက်လောက်အောင် ပေါ်တင်ကြီး မကြည့်ရင်တောင်မှပဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ကြတာမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု ဂျူဗင်တပ်စ်ကွင်းလယ်လူ မက်ကန်နီကတော့ သူ့ရှေ့က နတ်သမီးလေးရဲ့ အလှရေစီးကြောင်းမှာ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် မျောပါပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ မျက်စိအစာကျွေးနေတဲ့ရုပ်ပုံက လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ကောင်းကောင်းအလှောင်ခံနေပါပြီ။ အဲဒီနတ်သမီးလေးကလည်း မက်ကန်နီတင်မဟုတ်ဘူး၊ ပုရိသတိုင်း ကြွေကျရလောက်အောင် လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ အားကစားအစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ဒီလက်တာလီယော့တာလို့ အမည်ရတဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် မဒီလေးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ Instagram မှာ Follow လုပ်ထားသူက (၇)သန်းကျော်အထိရှိနေတာပါ။
လီယော့တာက စီးရီးအေပွဲတွေကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ DAZN ရုပ်သံလိုင်းက အားကစားအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ပြီး သူမဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ဗီရိုနာနဲ့ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ဂျူဗင်တပ်စ်အရန်ခုံတန်းနားမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတုန်း မက်ကန်နီက အဲဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံဘဲ အပီအပြင်ကြည့်ခဲ့တာပါပဲ။ သာမန်လောက်သာဆို ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် မက်ကန်နီကြည့်တဲ့ပုံက အသက်ရှုဖို့တောင်မေ့လောက်တဲ့အထိ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ ကြည့်နေတဲ့အပြင် ကံဆိုးချင်တော့ ကွင်းထဲက ကင်မရာကလည်း မက်ကန်နီ မျက်လုံးအစာကျွေးနေတဲ့အချိန်နဲ့ ကွက်တိရိုက်မိခဲ့တာကြောင့် အဲဒါကို သတိပြုမိလိုက်တဲ့ လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေရဲ့ Meme လုပ်တာကို ခံရတော့တာပါပဲ။ Twitter မှာ မက်ကင်နီရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေက နောက်ပြောင်နေကြပြီး Twitter အသုံးပြုသူတစ်ဦးက “မင်းလည်း ငါတို့လိုပါပဲလား မက်ကန်နီရယ်”လို့ နောက်ပြောင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေလည်း လီယော့တာရဲ့ အလှအပတွေကို ခံစားချင်ရင်တော့ Instagram မှာ Diletta Leotta လို့သာ ရိုက်ထည့်ပြီးရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးတာက လီယော့တာဟာ တူရကီရုပ်ရှင်မင်းသား ကန်ယာမန်နဲ့ တွဲနေပြီး မကြာသေးခင်က ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ အကြီးစားဟိုတယ်တစ်ခုမှာ သူတို့နှစ်ဦး (၅)ရက်ကြာအတူတူရှိခဲ့တာကြောင့် နှမျောတသဖြစ်စရာလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါ . . . .